Masinina thermoforming Factory - Masinina thermoforming mpanamboatra, mpamatsy
Masinina fonosana volo thermoforming
Ny packer an'ny vacuum dia antsoina koa hoe milina fonosana hoditra thermoform. Izy io dia mamorona fitoeram-bokatra henjana aorian'ny fanafanana, avy eo manarona ilay sary mihetsika ambony ambony amin'ny lovia eo ambany aorian'ny hafanana sy hafanana. Farany, ny fonosana vonona dia hivoaka aorian'ny fanapahana maty.
Masinina fonosana henjana Thermoforming
Masinina fonosana atmosfera novaina mandeha ho azy izay fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Masinina fonosana horonantsary Thermoforming. Mamelatra ilay takelaka plastika ho lasa lovia aorian'ny fanamafisana, avy eo manaosotra gazy vita amin'ny gazy, ary hamehezana ny lovia miaraka amin'ny fonony ambony. Farany, hamoaka fonosana tsirairay avy aorian'ny fanapahana maty izy io.
Izy io dia mamelatra ilay takelaka ho fonosana ambany azo ovaina aorian'ny fanamafisana, avy eo manosotra sy manisy tombo-kase ny fonosana ambany misy fonony ambony. Farany, hamoaka ny fonosana tsirairay avy aorian'ny fanapahana azy.